Raw Trenbolone poda (10161-33-8) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Trenbolone powder, zvichida inozivikanwa seTren maoko pasi imwe yeseriti yakasimba zvikuru inowanikwa. Iwe haungawani kemukisi inoshanda seTren, inokwanisa kukwanisa zvachose muviri.
Raw Trenbolone powder (10161-33-8) Tsanangudzo
Raw Trenbolone powder is an androgen and anabolic steroid (AAS) yeboka re nandrolone iro risina kutengeswa. Raw Trenbolone powder ester prodrugs, kusanganisira Raw Trenbolone powder acetate (marina mazita Finajet, Finaplix, vamwe) uye Raw Trenbolone powder hexahydrobenzylcarbonate (marita mazita eParololan, Hexabolan), kana kuti akatengeswa nezvechirwere chezvokurapa uye zvekurapa. Raw Trenbolone powder acetate inoshandiswa muzvigadzirwa zvemhuka mune zvipfuwo kuti kuwedzere musimba kukura uye kudya, asi Raw Trenbolone powder hexahydrobenzylcarbonate yaimboshandiswa kliniki kuvanhu asi iye zvino haisati yatengeswa. Mukuwedzera, kunyange zvazvo isina kubvumirwa kuchipatara kana kushandiswa kwezvokurapa, Raw terebolone yakakosha enanthate dzimwe nguva inotengeswa pamusika mutema pasi pezita rezita rokuti Trenabol.
Kemikari Name Raw Trenbolone powder; 10161-33-8; 17beta-Raw Trenbolone powder; Trienbolone; (+) - Raw trenbolone powder; 17-beta-Raw Trenbolone powder More ...
muchiso Name Finajet, Finaplix, vamwe
Molecular Wsere 270.37
Kunyorera Point 170ºC
APane Raw Trenbolone powder ndeimwe yevana anabolic steroid ine simba ine simba rinokurudzira kukwanisa kunyanya kune vatambi uye vavaki vomuviri. Raw Trenbolone powder inoshanda kupfuura testosterone kana yakashandiswa zvakanaka uye maererano nezvinorumbidzwa.
Chii chinonzi Raw Trenbolone powder (10161-33-8)?
Trenbolone powder ndeye androgen uye anabolic steroid mishonga inoshandiswa muzvigadzirwa zvemhuka, kunyanya kuwedzera kubatsirwa kwezvipfuwo kuburikidza nekusimudzira musimba kukura mumombe. Uye Iyo inopiwawo nejairo mumisumbu yekuvaka muviri kwevanhu.
Iyo yakakura sei Trenbolone powder (10161-33-8) mabasa
Inoshanda nekuvhara the Androgen Receptor pasina kuishandura iyo kune estrogen, iyo inoguma nemugumisiro wakananga pamusoro pekuwedzera kwemasisita mashoma.
Inobatanidzawo mafuta masero nekuvakamanikidza kuti vatevere kurasikirwa nzira.
Pane imwe nguva muhutano hwako, inosimbisa kushandiswa kwe nitrogen mumasumbu, iyo inobva ipa yakakwirira zvikuru kune protein synthesis.
Kutanga, Pakati Pakati, uye Advanced Trenbolone Dosages
Chikonzero uye manzwisisiro kumashure kwekutangwa kweTrenbolone manyore atove ataurwa uye akaratidzwa pamusoro apa. Zvakakosha kukuyeuchidza muverengi kuti mutangi wekutanga weTrenbolone haafaniri kumbove ari wekutanga anabolic steroid user - kusiyana kwemaviri kunofanira kujekeswa. Mutangi wekutanga kana vashandisi vekutanga veTrenbolone vanofanira kugara vaine huwandu hwakanaka hwechiitiko uye maitiro pasi pebhanhire ravo vasati vashandisa Trenbolone. Trenbolone pachayo haisi yekombani yekutanga vana analiclic steroid. Chero ani zvake anotarisa kushandisa Trenbolone kwenguva yekutanga anofanira kugara aine ruzivo rwakakwana kuti anzwisise muviri wavo uye kuti unopindirana sei kune zvakasiyana-siyana zvakatanga kutanga uye pakati peanbolic steroids (zvakadai saTesttosterone, Dianabol, Winstrol, nezvimwewo) uye nzira dzinokosha uye Dynamics inobatanidza vanabolic steroid miitiro. Mutangi wekutanga uye mutengi wekutanga weTrenbolone aizowana zvakakodzera Trenbolone doses pa 300mg vhiki nevhiki (yeuka kuti 1,500mg ye Testosterone yaizodiwa kuti ifanane neizvi nesimba). Vamwe vashandisi vekutanga veTrenbolone vakataura nezvehutano hunogutsa huchibva kubva kunyange 200mg kwevhiki yeTrenbolone, kunyange zvazvo mazera ari mumutanda iwoyo akakodzera nguva dzekurasikirwa kwemafuta apo kuchengetwa kwemaonda musimba kunoshandiswa munguva dze hypocaloric. Kukwidziridza pamusoro peizvi 300mg yega yega yeTrenbolone inenge isingadi nguva dzose, sezvo pasina wekutanga kana kuti anotanga kushandisa trenbolone anoshandisa doses zvakakwirira se400 kana 500mg vhiki nevhiki.
Pakati peTrenbolone doses yakaiswa mumhando ye 400 - 500mg vhiki imwe neimwe, nevashandisi vakawanda vari pakati pacho vanowirirana ku400mg vhiki nevhiki. Kazhinji inofanira kunge chero munhu anoshandisa mutero weTrenbolone achida chero chinhu chinopfuura 500mg pavhiki. Kunotsanangurwa kunofanira kuitwa pano kuti kusiyana pakati pevatatu vatatu vevashandisi (kutanga, pakati, uye mberi) hazvirevi kuwedzera madheji kana kuwedzerwa maitiro mushure mekunge imwe nguva. Kumusoro kana kukwirira kwakanyanya kweana anilicular steroid haisi iyo tsanangudzo yepamusoro. Vashandisi veTrenbolone vakagadziriswa vanofanira kufungidzirwa sevatenzi veTrenbolone, uye vane ruzivo rwakakwana uye kunzwisisa kwekuti kwete Trenbolone pachayo pachayo asi kuti muviri yavo inopindurwa sei nenzira dzakasiyana-siyana kuTrenbolone. Vashandisi vepamusoro vakave vachinyatsozivikanwa nekushandiswa kwepamusoro yeTrenbolone doses, asi izvi hazvishamisi uye zvakawandisa kunze kwekutonga. Mumamiriro ezvinhu akadaro, vashandisi vakakurumidza vakasimudza sepamusoro sa 800 - 1000mg kana kupfuura kwevhiki yeTrenbolone (yeuka kuti 800 - 1000mg yeTrenbolone yakaenzana ne4,000 - 5000mg ye Testosterone). Nezvo izvi zvave zvichisimbiswa, zvinokosha kuyeuka: marefu Trenbolone doses anoonekwa seine ngozi uye iye zvino ari kuwedzera hutano hwehutano kumuviri wemunhu uye haafaniri kuedza chero ipi zvayo. Kana munhu achida kuzviita, inofanirwa kuitwa nenheyo yepamusoro yekutarisira nekuchenjerera (uye zvachose kwete nevatangisi kana vashandisi vari pakati).
Raw trenbolone powder (10161-33-8) Makomborero
Trenbolone inogona kukubatsira kuti uwane hutachiona hwekukurumidza huchienzanisa kune dzimwe vanabolics.
Trenbolone inobatsira nekurasikirwa nemafuta nekuti inogona kushandisa mafuta senzvimbo inopa muviri.
Iko kuwedzera kwechikamu mu cortisol.
Inobatsira panguva yekucheka.
Inowedzera kuchengetedza kwe nitrogen.
Trenbolone inobatsirawo kubvongodza.
Tenga Trenbolone powder kubva kuBuasas.com